The Hague: Garsoore Soomaali ah oo loo doortay Guddoonka Maxkamadda Caalamiga ah – Kasmo Newspaper
The Hague: Garsoore Soomaali ah oo loo doortay Guddoonka Maxkamadda Caalamiga ah
Updated - February 7, 2018 11:49 am GMT
London (Kasmo), Garsoore sare oo Soomaali ah, Cabdulqawi Axmad Yusuf, ayaa maalintii shalay loo doortay Guddoomiyaha Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda (ICJ) ee The Hague; waxaa lala magacaabay 4 garsoore oo kale, kuwaas oo wixii hadda ka dambeeya daadihin doona dacwadaha la hor keeno Maxkamaddaas.
Cabdulqawi wuxuu sannadkii 1948kii ku dhashay Degmada Eyl ee Woqooyiga Soomaaliya wuxuuna sannadkii 1973kii ka qalinjabiyay Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed ee Muqdisho. Wuxuu tacliinta Sare ku soo qaatay Jaamacadda Florence (Italy) sannadkii 1977 iyo Jaamacadda Geneva ee Switzerland.
Sannadkii 1974 ilaa 1981 wuxuu Bare Sare ka ahaa Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed ee Muqdisho. Intii u dhexaysay 1975-1980 wuxuu Soomaaliya u matalay Kulanka Qarammada Midoobay ee ‘Third United Nations Conference on the Law of the Sea’.
Wixii intaa ka dambeeyay wuxuu waligii ka shaqaynayay Hay’adaha Caalamiga ah, dhanka talabixinta, markii dambana Garsoorenimo. Wuxuu Maxkamadda Hague ku soo biiray sannadkii 2009kii, bishii Febrayo 2015kiina waxaa loo magacaabay Guddomiye ku-xigeenka Maxkamadda.
Yusuf waa garsoore Caalami ah khibrad buuxdana leh, wuxuu asaasay isla markaana tifaftire ka yahay ‘the African Yearbook of International Law’, wuxuuna ka tirsanyahay asaasayaasha ‘African Foundation for International Law’ oo Guddoomiye ku-xigeen uu ka yahay Guddigiisa Fulinta.
Wuxuu qoray buugaag badan iyo qoraallo isugu jira noocyada kala duwan ee Sharciga Caalamiga ah, iyo lafagurista xaaladda siyaasadeed ee Geeska Afrika iyo gaar ahaan Soomaaliya.
Wuxuu xilka ka beddelayaa Ronny Abraham oo Faransiis ah isaga oo noqonaya Guddoomiyihii 25aad ee Maxkamadda ICJ iyo ninkii 3aad oo Afrikaan ah oo xilkaas qabta, Taslim Elias (1982-1985) iyo Mohamed Bedjaoui (1994-1997) ka dib.
Maxkamadda Caalamiga ah ICJ (International Court of Justice) oo fadhigeedu yahay Nederlands waa ha’adda ugu sarreysa Qarammada Midoobay dhanka sharciyada, waxaa la asaasay sannadkii 1945kii waxayna qaaddaa dacwadaha sharciga ah ee Dawladaha, iyada oo talooyinka qaanuuniga ah u gudbisa Ha’adaha kale ee Qarammada Midoobay.